कमिशनपनि मेयरसापकैमा डाईरेक्ट जान्छ, के हो ? कसो हो ? मलाई थाहा छैन् : उपमेयर खड्गी (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
कमिशनपनि मेयरसापकैमा डाईरेक्ट जान्छ, के हो ? कसो हो ? मलाई थाहा छैन् : उपमेयर खड्गी (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७७, मंगलबार
काठमाडौं, ३० भदौ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले महानगरले कोभिड–१९ को अस्पताल बनाउन नसकिएको गुनासो पोखिन् । उनले भनिन्,‘मैले त हरेक बोर्डको बैठकमा आफ्नो राखिरहेकी छु । हरेक वडामा क्वारेन्टिन बनाउनका ेलागि बजेट छुट्याईदिनुपर्छ भनेकै हो । आईसोलेशन राख्नुपर्यो भनेर मैले भनेकै हो नि । कि भने कोभिडको हस्पिटल छुट्टै बनाउन सक्नुपर्यो हामीले । यो चाहीँ अहिलेसम्म बनाउन सकिएन । किनकी हामीसँग बजेटपनि कमी छैन् ।’
हिजो राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उपमेयर खड्गीले यस्तो बताएकी हुन् । पत्रकार धमलाले तपाईहरुलाई भ्रष्टाचार गर्नको लागि र पैसा कमाउन फाईदा छ नि ? भनेर सोधेको कडा प्रश्नमा उपमेयर खड्गीले भनिन्—‘भ्रष्टाचारको त मलाई भन्ने होईन, यो कुरा । महानगरपालिकामा भ्रष्टाचार भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । भयो कि भएन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन् । मसँग प्रमाण छैन् ।’
उसो भए मेयर र उपमेयर मिलेर खाईरहनुभएको होला ? भनेर धमलाले सोधेको अर्को प्रश्नमा उनले भनिन्,यो विषयमा तपाई मलाई पेल्दै नपेल्नुहोस । किनभने पैसाको विषयमा मैले एक पैसा पनि छोएको छैन् । एक रुपैयाँपनि मैले पैसा छुँदिन् । कमिशनपनि मकहाँ आउँदैन् । मेयरसापकहाँ डाईरेक्छ जान्छ । कमिशन के हो ? कसो हो ? मलाई थाहा पनि छैन् । म चाहीँ स्वच्छ रुपमा जितेर जनताको सेवा गर्न गएको हुँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको निजी चिकित्सक डा. शाहलाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं, १० असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाहलाई
एनडिएले भन्यो : ‘गणतन्त्र असफल, राजसंस्था सफल’ (भिडिओसहित)
‘२०४७ को संविधान पूनःस्थापित गर्न माग’ काठमाडौं, १० असोज । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठवन्धनले देशका विद्यमान
काठमाडौं, १० असोज । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यतिवेला मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनको तयारीमा जुटेको छ
मोहन बस्नेतको टिप्पणी : ‘मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनबारे हाम्रो चासो छैन्, सरकारले राम्रो काम गरेहुन्छ’
काठमाडौं, १० असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर
दार्चुला पुगेर गृहमन्त्री थापाले भने : सीमाको सुरक्षाको लागि सबै एक हुनुपर्छ
दार्चुला, १० असोज । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सीमाको सुरक्षा सुरक्षाकर्मीबाट भन्दा स्थानीय वासिन्दाबाट
अबको मन्त्रिमण्डल राम्रो बन्छ, हामीले लिएको लक्ष्य हाँसिल हुन्छ : सोमप्रसाद पाण्डे (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १० असोज । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा
डा. केसीको पक्षमा मानवअधिकार आयोगदेखि नेविसंघसम्म, सरकारलाई चौतर्फी दबाब
असोज ९, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर अनशनरत डा.
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीद्वारा कोभिड–१९ खोप पत्ता लागेमा सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता
१० असोज: अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आफ्नो देशले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विकास गरेमा खोप विकासबारे